अनन्त पत्ता लाग्यो निर्मला पन्तको हत्यारा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले गरे यस्तो खुलासा”…?
देउवा सरकारले निर्मला पन्तको ह’त्यारा पत्ता लगाएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले निर्मला पन्तको ह’त्यारा पत्ता लागेको बताएका छन् ।ह’त्याराको पहिचान भइसकेको र उनलाई छिट्टै प’क्राउ गरिने मन्त्री खाँडको भनाई छ । बिहीबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा बोल्दै गृह मन्त्री खाँणले निर्मला पन्त ‘हत्यारा पत्ता लागेको बताएका हुन् ।
नेपालमा ओमिक्रोन भेरिअन्टका दुईजना सङ्क्रमित फेला परेसँगै खासगरी काठमाण्डू उपत्यकामा सम्भावित प्रतिबन्धात्मक कदमलाई लिएर सर्वसाधारणले चासो व्यक्त गर्न थालेका छन्।
ओमिक्रोन भेटिएको देशबाट मंसिर ३ गते नेपाल प्रवेश गरेका एक ६६ वर्षीय विदेशी र उनको सम्पर्कमा आएका अर्का ७१ वर्षीय व्यक्तिमा सङ्क्रमण भेटिएको सोमवार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको थियो। दक्षिण अफ्रिकामा पहिलोपटक फेला परेको ओमिक्रोन भेरिअन्ट अहिलेसम्म भारतसहित ४० भन्दा बढी देशमा फैलिसकेको छ।
के भन्छन् सीडीओहरू?
कोभिड महामारी शुरू भएयता नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि काठमाण्डू उपत्यकाका काठमाण्डू, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला प्रशासनहरूले एकसाथ प्रतिबन्धात्मक कदमहरू चाल्दै आएका छन्।
उपत्यकामै ओमिक्रोनका सङ्क्रमित भेटिनुलाई आफूहरूले “गम्भीर” रूपमा लिएको काठमाण्डूका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजाल बताउँछन्।
२०७८ मंसिर २३, बिहीबार प्रकाशित0Minutes 192 Views